Devanagari Newsनर्मल वा सिजेरियन डेलिभरी ? — Devanagari News
नर्मल वा सिजेरियन डेलिभरी ?
नर्मल डेलिभरी गराउने कि सिजेरियन दम्पती एवं गर्भवतीको मनमा उठ्ने तर्क–विर्तक हुन् । सामान्य डेलिभरी गराउनु उचित हुन्छ वा सिजेरियन ? कुन सहज र सुविधायुक्त ? कुन सुरक्षित ? कुन राम्रो ?
किनभने अहिले सिजेरियन डेलिभरीको ट्रेन्ड बढ्दो छ । स्वभाविक एवं सामान्य रुपमा हुन नसक्ने प्रसूतीका लागि यो वैकल्पिक विधी हो । विगतमा यस्तो सुविधा थिएन । त्यसैले कतिपय जटिल अवस्थामा हुने प्रसूतीले गर्भवतीको ज्यानलाई जोखिममा पाथ्र्यो । साथसाथै त्यो एकदमै पीडादायक पनि हुनेगथ्र्यो ।
सिजेरियन डेलिभरी गराउने व्यवस्था भएसँगै यसमा केही सहजता आएको छ । खासगरी जटिल अवस्थाको प्रसूती गराउनु परेमा वा स्वाभाविक रुपमा प्रसूती हुन नसक्ने अवस्थामा यो एउटा भरपर्दो र सहज विकल्प बनेको छ ।
तर, सिजेरियन डेलिभरी गराउँदा लाग्ने खर्च र सामान्य डेलिभरीमा लाग्ने खर्च–अन्तर फरक छ । त्यसैले खासगरी निजी अस्पतालहरुमा प्रसूती गराउँदा सिजेरियनलाई नै जोड दिइन्छ भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ । साथसाथै यसलाई लिएर दम्पतीबीच विभिन्न भ्रम पनि हुने गर्छ ।
सिजेरियन डेलिभरी गराउँदा सहज हुनेभएपनि त्यो कृतिम विधी भएकाले कतिपय दम्पती यसमा राजी हुँदैनन् । अर्कोतर्फ बच्चालाई एउटा निश्चित दिन, समयमा जन्माउन चाहने दम्पतीले भने सिजरियनको विकल्प नै अपनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
के हो त वास्तविकता ? सिजेरियन डेलिभरी गराउनु उचित कि सामान्य ? कुन बढी लाभदायक ? वा सिजेरियनको विकल्प कस्तो अवस्थामा मात्र अपनाउने ? यसका जोखिम के हुन् ?
विश्वभर सिजेरियन डेलिभरी गराउने प्रचलन बढ्दो छ । यसप्रति चिन्ता गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ, ‘सिजेरियनको विकल्प त्यसबेला मात्र अपनाउनुहोस् जब मेडिकल रुपमा यसको जरुरी हुन्छ ।’ अर्थात सामानय अवस्थामा हुने डेलिभरीमा सिजेरियन गर्नु उपयुक्त नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले संकेत गरेको छ ।
सिजेरियन डेलिभरीले सामान्यको तुलनामा आमा र बच्चालाई बढी असर गर्न सक्छ । सिजेरियनमा पेट चिरेर बच्चाको गर्भाशय बाहिर निकालिन्छ । सामान्य प्रसवमा महिलालाई २४ घण्टामा अस्पतालले विदा दिन्छ तर सिजेरियनमा कम्तीमा चार÷पाँच दिन अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
कहिले जरुरी हुन्छ सिजेरियन ?
–गर्भवती महिलामा उच्च रक्तचाप भएमा । किनभने यस्तो अवस्थामा मस्तिष्को नसा फुट्न सकने वा मिर्गौला र कलेजो खराब हुनसक्ने जोखिम हुन्छ ।
–कहिले काहीँ छोटो कद भएका महिलामा पनि सिजेरियन डेलिभरी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता हुन्छ ।
–कहिले काहीँ औषधिले पाठेघरको मुख खुल्न पाउँदैन, यस्तो अवस्थामा सर्जरी गर्नुपर्छ । धेरै रक्तश्राव हुँदा पनि सर्जरी गर्नुपर्छ ।
–बच्चाको धड्कन कम हुँदा वा गलामा गर्भनाल लपेटिएको अवस्थामा, बच्चा उल्टो बसेको अवस्थामा सर्जरीको विकल्प अपनाउनुपर्छ ।
–बच्चाले जब पेटमा फोहोर पानी अर्थात मल मूत्र गर्छ त्यसलाई मिकोनियम भनिन्छ । यस्तो स्थितीमा तुरुन्त अपरशेन गर्नुपर्छ ।
पहिलो बच्चा सिजेरियन भयो भने दोस्रो बच्चा समान्य हुँदैन ? यस्तो संभावना यसकारण मात्र रहन्छ कि दोस्रो सिजेरियनको क्रममा टाँका फाट्ने डर हुन्छ । यदि पहिलो पटक सिजेरियन डेलिभरी गराइएको छ भने दोस्रो पटक सामान्य डेलिभरी हुँदैन भन्ने छैन ।
सिजेरियन पछि महिलाले पुरा आरम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई छ । सर्जरीपछि आरमको जरुरत त हुन्छ तर एक महिनापछि उसले आफ्नो नियमित काममा फर्कन सक्छन् ।
कहिले जरुरी हुन्छ डेलिभरी ?
सामान्य रुपमा डेलिभरी ३७ हप्ता वा ४० हप्ताको बिचमा हुनुपर्छ । यो चक्र पूर्ण हो र यसले बच्चा स्वास्थ रहन्छ । कम हप्तामा डेलिभरी भएमा आमा र बच्चा दुबैमा केही किसिमको स्वास्थ्य संकट आउनसक्छ । त्यसैले ध्यान राख्नुपर्छ र चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
किटो डाइट : अन्धधुन्ध सेवनले ज्यानलाई जोखिम
मधुमेहका बिरामीको लागि गुलियो खाना, यी हुन् विकल्प
ऐश-आरम र सुविधाभोगी जीवनशैलीले बनाउँदैछ रोगी
के बदल्न जरुरी छ सोंच, व्यवहार र कार्यशैली ?
दर्द निर्दयी हुन्छ
अपराध बोध र ग्लानीबाट कसरी मुक्त हुने ?